Isimo Iyo Siyaasiyiin Reer Puntland ah Oo Muqdisho ka Wada Kulamo Lagu Dhaawacayo Jiritaanka Puntland (Warbixin) – Idil News
MUQDISHO(IDIL NEWS)-Magaalada Muqdisho ee Xarunta Dowladda Federaalka Soomaaliya waxaa ka socda Kulamo lagu Abaabulayo Xasilooni darro Amni iyo mid Siyaasadeed oo ka dhan ah Dowladda Puntland, kuwaas oo ay qeyb ka yihiin Isimo iyo Xubno kasoo jeeda Deegaanada Puntland oo ka tirsan Dowladda Federaalka Soomaaliya.
Kulan shalay lagu qabtay Muqdisho oo lagu dhisayay Qorshe lagu abaabulayo Shacabka Puntland, ayaa waxaa soo qaban-qaabiyay Ra’iisulwasaare Kheyre iyo Madaxweyne Farmaajo, Iyagoona Wakiil ay uga yihiin Wasiiru Dowlaha Wasaaradda Maaliyadda Xayir iyo Xildhibaan Cabdi Xoosh, kuwaas oo horey Masuul uga ahaa Qorshihii Fashilmay ee la doonayay in lagu Khal-khal geliyo Xasiloonida Amni ee ka Caasimadda Puntland, si loo hor istaago Shirkii Golaha Iskaashiga eek a Qabsoomay Garoowe.
Kulankan ayaa waxaa ka qeyb-galay Suldaan Garaase oo kamid ah Isimada Gobalka Nugaal iyo Ugaas Xasan oo kamid ah Isimada Gobalka Bari, kuwaas oo ay Casuumeen Xubnaha Villa Soomaaliya u xilsaartay Dhibaateynta Hanaanka Dowliga ah ee Puntland, waxaana sidoo kale joogay Senator C/rixmaan Faroole oo ah Madaxweynihii hore ee Dowladda Puntland.
Kulankii shalay ayaa Dhinacyada ka qeyb-galay oo Xubnaha aan xusnay Magacyadooda ay ka badnaayeen ayaa lagu heshiiyay in Khal-khal amni iyo mid Siyaasadeed laga abuuro Deegaanada Puntland, Iyadoona lagu bilaabayo Banaan-baxyo ay dhigaan Shacabka Magaalooyinka Garoowe iyo Boosaaso, kuwaas oo looga soo Hor-jeedo Qodobadii kasoo baxay Shirka Golaha Iskaashiga Dowlad Gobaleedyada eek a dhacay Garoowe.
Sidoo kale, Dhinacyadan ayaa ku heshiiyay inay Abuuraan Kacdoon Isimo ah oo kasoo Hor-jeeda Madaxweynaha Dowladda Puntland Dr. C/weli Maxamed Cali Gaas, Iyadoona Goobta ka sheegay Isimo ay Magacyadooda naga Qariyeen Ilo Wareedyo nala hadlay, kuwaas oo Xubnaha Muqdisho ku shiray ay sheegeen inay u nugul yihiin Afkaartooda.
Wararka aan helnay ayaa tibaaxaya in Isimada ka qeyb-galay kulanka ee kala ah Suldaan Garaase iyo Ugaas Xasan, aysan Cadeyn Mowqifkooda ku aadan Qorshaha ay wataan Kooxda DF Soomaaliya soo Dirsatay iyo inay Taageersan yihiin, waxaana ay ahaayeen Goobjoogayaal oo kaliya.
Xubnahan ayaa la balansanaa Ra’iisulwasaare Kheyre, si ay ugala tashtaan Waxyeelaynta Hanaanka Dowliga ah ee Puntland, Iyagoona u Bandhigi doona Dhaqaalaha uu ku kacayo Qorshaha ay Dajiyeen ee lagu Khal-khal gelinayo Xasiloonida Dowladda Puntland ee Gaamurtay.
Warbaahinta Caalamiga ah ee Idil News, ayaa heshay Xog Sheegaysa in Senotar C/rixmaan Faroole oo ah Madaxweynihii hore ee Dowladda Puntland, si weyna u Difaaca Jiritaanka iyo Maqaamka Puntland, uu Qorshaha kulankan uu uga qeyb-galay uu yahay in Dowladda Federaalka uu ka helo lacag uu ku Taageero Musharax Faarax Cali Shire oo haatan u taagan Hoggaaminta Puntland ayna wada yihiin Xulufo iyo Ehel dhow.
Saraakiil ka tirsan Hay’adaha Amniga Puntland ayaa Sheegay in Qorshahan ay ka Warhayaan, ayna u Fashilin doonaan sidii kuwo badan oo ka Horeeyay ay u Fashiliyeen, waxaana ay tibaaxeen in Khal-khal gelinta Xasiloonida Amni iyo Siyaasadeed ee Puntland aysan qofna uga heybaysan doonin.